महरा राजनीतिको दोस्रो इनिङ, यस्तो भन्छन नेकपा नेताहरू, पार्टीमा फर्किन्छन कि फर्किदैनन ? - Himali Patrika
महरा राजनीतिको दोस्रो इनिङ, यस्तो भन्छन नेकपा नेताहरू, पार्टीमा फर्किन्छन कि फर्किदैनन ?
हिमाली पत्रिका ९ फाल्गुन २०७६, 2:33 am
काठमाडौँ । सभामुख पदमा रहेका बेला संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बला’त्कार प्रयासजस्तो गम्भीर आ रोप खेपेर पद गुमाएका कृष्णबहादुर महरा सरकारी निवासबाटै प क्राउ परे । पक्राउ परेको १३३ दिनपछि उनले अदालतबाट राहत पाएका छन् । जयसिंह महराले कान्तिपुर दैनिमा समाचार लेखेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई सोमबार उक्त आ रोपमा सफाइ दिएको छ। १० वर्षे स’शस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादीका शीर्ष मध्येका नेता थिए महरा। माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच भएका वार्तामा विद्रोही पक्षका एक प्रमुख वार्ताकार थिए महरा। वि’द्रोही माओवादीका तर्फबाट वार्ता टोलीको सदस्यदेखि संयोजकसम्मको भूमिका निभाएका थिए।
२०४८ सालमै सांसदका रूपमा महरा सिंहदरबार प्रवेश गरिसकेका थिए। त्यसपछि उनी २०६३, २०६४, २०७० र २०७४ मा सांसद निर्वाचित भए। पाँच पटक सांसद बनेका उनले संसदीय मोर्चाको शीर्ष पदमा पुगेका बेला ब लात्कार प्रयासको आरोप खेप्नुपर्‍यो। जसले पार्टी र संसदीय मोर्चामा उनले जीवनभर आर्जन गरेको राजनीतिक पुँजीमा पहिरो ल्यायो।
त्यसो त महरालाई नेकपाले सभामुखसँगै सांसदबाट पनि राजीनामा दिन भनेको थियो। नेकपा सचिवालय बैठकले ब ला त्कार प्रयासको आरोप लागेपछि महरालाई सभामुख र सांसदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो। सभामुखबाट राजीनामा दिएर आफूमाथि लागेको आरोपको न्यायिक रूपमा सामना गरेका उनलाई नेकपाले कस्तो स्थान देला त भनेर जिज्ञासा राख्‍ने नेकपाभित्रै छन्।
अदालतबाट सफाइ पाएर डिल्लीबजार का रागारबाट खुमलटारस्थित डेरामा पुगेपछि महराले सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनले विज्ञप्तिमा ‘तथाकथित’ आरोप लगाएकोमा अदालतबाट सफाइ पाएको र आफू राष्ट्र, राष्ट्रियताका पक्षमा सधैँ लागिरहने’ लेखेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उनले राजनीतिमा फर्किने स्पष्ट सङ्केत गरेका छन्।
महरा सक्रिय पार्टी राजनीतिमा आउनुपर्ने र पार्टीले पनि भूमिका दिनुपर्ने थापाको भनाइ छ। महराको आगामी राजनीतिक भूमिका सरकारी पक्ष उनीविरुद्ध मु द्दा लिएर उच्च अदालत गएमा त्यहाँबाट आउने फैसला, नेकपाले दिने जिम्मेवारीका साथै उनकै नैतिक निर्णयको कडीमा अडिएको छ।